Yeqa Isikhwama, Isikhwama Sokususa Udoti, Isikhwama Sokulahla Ingadi - IBAOTE
IBAOTE INDUSTRIAL GROUP etholakala “enhlonhlweni” enhle eQingdao City of China ibhizinisi elisha likazwelonke nobuchwepheshe be-hi-tech elizuza ifa lesiko futhi liphishekela izindlela ezintsha. I-BAOTE Group inamagatsha amancane amathathu agxile emugqeni webhizinisi ohlukile.
Okokuqala imikhiqizo yensimbi-Zonke izinhlobo zebhawodi ejwayelekile nengekho esimeni, amantongomane, isher eyisicaba, izikulufu nemigqomo yensimbi yemfucumfucu, isitsha sensimbi esisezingeni le-BAOTE Industrial Manufacturing Co ,. LTD
Okwesibili izikhwama zepulasitiki-Zonke izinhlobo zesikhwama sokuqaqa, isikhwama sekhonkrithi sokuwasha amaphampu, isikhwama sokukhishwa kwe-asbestos, isikhwama esikhulu; Konke kukhiqizwe nguMholi Weqiniso wePlastiki.
Okwesithathu yiQingdao Rainbow Tech Co., Ltd, okuyi-Precast Concrete pipe imishini nomhlinzeki wemishini yePlastiki. Lo mkhiqizo ufaka phakathi umshini wokwenza ipayipi odlidlizelayo we-Concrete ngo-2005 futhi wathuthukisa ngempumelelo umshini wepayipi wokuqala oqondile we-radial extrusion ngo-2012. Umugqa we-Prestressed Concrete Cylinder Pipe (PCCP) nawo usezingeni.
Umbuzo 1: Singakunciphisa kanjani ukugqoka kwekhebula le-cage? 1. Kujwayelekile ukuthi abakhiqizi bemishini ye-cage welding bagqoke izingxenye ngenkathi besetshenziswa. Ukuze sinciphise ukugqoka phakathi kwezingxenye, kufanele sikhokhe ...
Phinda usebenzise izikhwama zepulasitiki: khetha izikhwama ezimbalwa eziqinile zepulasitiki uziphathe zizungeze esikhwameni sakho ukuze ukwazi ukuthenga ngezakho izikhwama esikhundleni sezinto ozihlinzekwe esitolo. Izikhwama zepulasitiki ezingasetshenziswa kalula kulula ...
Inkambu Yezobuchwepheshe: Ukusungulwa kuphathelene ne-hook-and-loop exhuma okungenani izingxenye ezimbili, njengehhanisi nelungu langaphambili. Ingemuva: I-hook-and-buckle uhlobo lwentambo, ibhande, i ...
Siphe i-imeyili yakho futhi uzobuyekezwa nsuku zonke ngemicimbi yakamuva, ngokuningiliziwe!
Izinqola Zokuhamba, Isakhiwo Bolts, U Bolts, Ama-Lag Bolts, I-Hex Bolts, Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine,